ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ဘာကြောင့်ခေါင်းကိုက်သလဲ၊ ဘယ်လိုမျိုးကုသမလဲ ???
Home Lotaya ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ဘာကြောင့်ခေါင်းကိုက်သလဲ၊ ဘယ်လိုမျိုးကုသမလဲ ???
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်ကာလဟာ ချစ်မေမေတို့အတွက် ထိလွယ်ရှလွယ် အချိန်ကာလဖြစ်ပြီး ဝေဒနာမျိုးစုံကို ခံစားရလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာကလည်း မပါမဖြစ် ရှိနေပါတယ်။ ဗိုက်ထဲက သားသားမီးမီးလေးအတွက် စိုးရိမ်ရ၊ အပြင်ကို အလုပ်အမြဲတမ်းသွားနေရတဲ့ ချစ်ခင်ပွန်းကို စိုးရိမ်ရ၊ အိမ်အလုပ်တွေကို အာရုံစိုက်ရနဲ့ ခေါင်းကိုက်စရာတွေ အင်မတန်ကို များပြားနေတာပေါ့။ အဲ့ဒါကြောင့် ဒီနေ့မှာတော့ ချစ်မေမေတို့ ဖြစ်ပွားလေ့ရှိတဲ့ ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာအကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အကျယ်တဝင့် ရှင်းပြချင်ပါတယ်။
ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်တာက ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲများ၊ စိတ်ဖိစီးမှုများ၊ အော့အန်ခြင်း၊ အိပ်ရေးပျက်ခြင်းနဲ့ ရေဓာတ်ခမ်းခြောက်ခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ခေါင်းရဲ့တစ်ခြမ်းမှာ တဆစ်ဆစ်နဲ့ နာကျင်ကိုက်ခဲနေပြီး ဒီအရာက မျက်လုံးထဲကို အလင်းရောင်တွေ မြင်ယောင်လာစေသလို နားထဲမှာလည်း အသံဗလံတွေကို ကြားယောင်လာစေနိုင်ပါတယ်။ ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက် ဝေဒနာကိုခံစားနေရတဲ့ ချစ်မေမေတို့အနေနဲ့ မျက်စိနာခြင်း၊ အမြင်အာရုံမကြည်လင်ခြင်း၊ စိတ်အပြောင်းအလဲများခြင်း၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊ ဆီးမကြာခဏသွားခြင်း နဲ့ ဝမ်းလျှောခြင်းတို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီဝေဒနာကတော့ လည်ပင်း၊ ဦးရေပြား၊ ပခုံးနဲ့ မေးရိုးမှာရှိတဲ့ ကြွက်သားတွေ တင်းမာနေတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် စိတ်ဖိစီးမှုများ၊ စိတ်ကျရောဂါနဲ့ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကြောင့်လည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အိပ်ရေးပျက်တာ၊ အလုပ်ကြောင့် စိတ်ဖိစီးတာ၊ အစားပုံမှန်မစားတာတွေကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်။ ဇက်ပိုးကနေ ခေါင်းအထိ တင်းနေအောင် ညှစ်ထားသလိုမျိုး ခံစားရပြီး ခေါင်းကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ညှစ်ထားသလို ခံစားရတဲ့အထိ ပြင်းထန်နိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ဖြစ်တောင့်ဖြစ်ခဲ ခေါင်းကိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပါ။ ဖြစ်လာရင်လည်း အင်မတန်မှ ပြင်းထန်ပြီး မျက်လုံးတစ်ဖက်တည်းကနေ မျက်ရည်တွေကျလာတဲ့အထိ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုက်ခဲခြင်း၊ နားထင်ကြောမှ ကိုက်ခဲခြင်းတို့အပြင် နှာခေါင်းသွေးယိုခြင်းတို့အထိ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ခါတလေ နာရီပိုင်းနဲ့ သက်သာသွားတတ်ပေမယ့် တစ်ခါတရံမှာတော့ ရက်သတ္တပတ်ကနေ လပေါင်းများစွာအထိ ကြာမြင့်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးခေါင်းကိုက်ဝေဒနာတွေ ခံစားလာရပြီဆိုရင် အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။
လက်မနဲ့လက်ညှိုး နှစ်ချောင်းကြားနေရာကို ခပ်ဖွဖွလေး နှိပ်ပေးပါ။ ခြေထောက်မှာဆိုရင်လည်း ခြေသကြွယ်နဲ့ခြေသန်းတို့အကြား နေရာကို ခပ်ဖွဖွလေးနှိပ်ပေးပါ။ ဒီနည်းလမ်း (၂) မျိုးက ခေါင်းကိုက်တာတွေအပြင် သွားကိုက်တာ၊ နောက်ကျောနာကျင်တာတို့ကိုလည်း ပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီး ရေနွေးငွေ့ရှူတာက ခေါင်းကိုက်ပျောက်စေနိုင်သလို ပခုံး၊ နောက်ကျောနဲ့လည်ပင်းတို့ကို နှိပ်နယ်ပေးတာကလည်း ခေါင်းကိုက်ပျောက်စေနိုင်ပါတယ်။
၂။ ရေပူရေအေးနဲ့ ရေချိုးပေးခြင်း။
ရေအေးအေးနဲ့ ရေချိုးပေးတာ၊ ရေအေးထွက်တဲ့ရေပန်းနဲ့ မျက်နှာသစ်ပေးတာကလည်း ခေါင်းကြောတွေ တင်းမာနေတာကို ဖြေလျှော့ပေးနိုင်သလို Epsom Salt ခတ်ထားတဲ့ ရေခပ်နွေးနွေးနဲ့ (၁၅) မိနစ်လောက် ရေချိုးပေးတာကလည်း ခေါင်းကိုက်ခြင်းကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။
၃။ မှန်ကန်တဲ့ဘရာဆိုက်ဒ်ကို ရွေးချယ်ဝတ်ဆင်ပါ။
ခေါင်းနဲ့ရင်သား ဘာဆိုင်လဲမေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ရင်သားတွေ ကြီးထွားလာတာကြောင့် လည်ပင်းနဲ့နောက်ကျောတို့ကို ဖိအားဖြစ်စေပြီး ခေါင်းကိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
ဂျင်းမှာ ပါဝင်တဲ့ Antioxidant တွေက ကိုက်ခဲခြင်းကို သက်သာစေတာကြောင့် ခေါင်းကိုက်တာအပြင် အခြားသောမည်သည့်ကိုက်ခဲမှုမျိုးကိုမဆို ခံစားရသည်ဖြစ်စေ၊ ဂျင်းကို ရေနွေးနဲ့ဖျော်ပြီး သောက်သုံးသင့်ပါတယ်။ နဖူးပေါ်မှာ ဒါမှမဟုတ် နားထင်နှစ်ဖက်ကို ရေနွေးအိတ် ဒါမှမဟုတ် ရေခဲအိတ်ကပ်တာကလည်း ခေါင်းကိုက်ခြင်းကို သက်သာစေတဲ့ဆေးနည်းတစ်ခုပါ။ ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်တဲ့ဝေဒနာအတွက် ရေနွေးအိတ်ကပ်တာထက် ရေခဲကပ်တာက ပိုပြီးထိရောက်မှုရှိပါတယ်။
လာဗင်ဒါအဆီအနှစ်ကလည်း ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် ခေါင်းကိုက်ခြင်းကို သက်သာစေပြီး ကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်စေနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလ ပထမ (၃) လပတ်ကာလအတွင်းမှာ ခေါင်းကိုက်တယ်ဆိုရင် လိမ္မော်သီး ဒါမှမဟုတ် သံပရာသီးက ရတဲ့ အဆီအနှစ်တွေကို နားထင်ပေါ် ပွတ်လိမ်းပေးခြင်းဖြင့် ခေါင်းကိုက်သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒီအဆီအနှစ်တွေကို လည်ပင်းတစ်ဝိုက်ကို ပွတ်လိမ်းရင်း ဖွဖွလေးနှိပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလမှာ ဘယ်လိုအသေးအဖွဲမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကျွမ်းကျင်ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်သင့်ပြီး သူတို့ပေးတဲ့ဆေးတွေကိုလည်းသောက်၊ ချစ်မေမေတို့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေ အိမ်တွင်းဆေးဝါးနည်းလေးတွေနဲ့ ကူလို့ရအောင်၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလ ခေါင်းကိုက်ခြင်းအကြောင်းတွေကို သိရှိထားရအောင် အခုလိုမျှဝေပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Source: momjunction, healthline
Previous articleသားသားမီးမီးတို့အတွက် ဥာဏ်ရည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေမယ့် အစားအသောက်ကောင်းများ
Next articleပူတူတူးအရွယ်လေးတွေကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးဖို့အတွက် မှန်ကန်တဲ့နည်းလမ်းများ